About ICO: Yaa ururiyay lacag badan inta lagu jiro iibka calaamo - Blockchain News
Sanadkii la soo dhaafay, ICO ahayd habka ugu caansan ee dhaqaale u ururinaya. Laakiin khubarada tilmaamay in aan arki doono hab ka duwan in qabashada iibka calaamo in 2018. Haddaba aynu ugu yeerto oo mashaariic ururiyay lacag badan inta lagu guda jiro ICO-mararka qaarkood, in dhowr il biriqsi.
EOS – The Kaabayaasha ugu awooda badan for Codsiyada baahsan
In ka badan $700 million ururiyay. ICO ayaa weli socda
EOS waa boosteejo ah oo baahsan loogu talagalay horumarinta codsiyada baahsan. Abuuraha reer EOS waa Dan Larimer. Waxa uu sidoo kale loo yaqaan aasaasihii BitShares, Steem, iyo BitUSD.
Waxaa xusid mudan in ku dhiirigelinayaan in uu go'aansaday in ay sameeyaan lacag ururin ilaa June 2, 2018. Waa muddo badan mashaariicda sida. Dhamaadkii October, at Miisaanka Launch 2017 Shirka Brock Pearce ayaa sheegay in EOS ee ICO u dhawaatay inay soo jiidatay $700 milyan oo 345 maalmood, iyo waxa aan ahaa xadka. Sida laga soo xigtay Pearce, ICO this badan soo ururin doonaa $1 billion ka hor waxaa la dhammeeyey.
madal waxaa lagu qaley blockchain in format ee nidaamka qalliinka for horumarinta. Ujeedada asaasiga ah waa in ay hagaajiso waxqabadka ee teknoolajiyada macluumaadka (ma jirto xadka si kaamil ah, iyo awoodaha ka mid ah nidaamyada sida ku kooban oo keliya by miyir aadanaha) iyo si ay u xaliyaan dhibaatada of scalability blockchain by sii kordhaya tirada dadka isticmaala inay malaayiin iyo xawaaraha macaamil in malaayiin per labaad iyada oo xisaabaha isku midka ah iyo processing xogta. Kuwani waa fikrado cajiib ah. shaqaynaya Shabakadda la xaqiijin doonaa by DPoS (Caddaynta wakiishay ee saamiga). Taasi waa, waxaa lagama maarmaan ah in ay sii jeebka la qadaadiicda qaar ka mid ah waqtiga oo dhan xawilaada in ay u muuqdaan in ay blockchain. tirada la taaban karo oo aan la xaq haatan bixin karaa, laakiin falanqeeyay mabda'a macdanta POS, waxaa si cad u sheegay in lacagta qadaadiicda badan ee aad qubo, fursadaha dheeraad ah aad leedahay si aad u hesho block a. Habkani waxaa sidoo kale cadeeyay in shabakada bulshada Steemit, halkaas oo qiyaas ahaan waqtiga si loo xaqiijiyo macaamilka waa laba ilbiriqsi.
FileCoin – Suuqa A baahsan for Data Kaydinta
$257 million ururiyay
FileCoin waa shabakad baahsan ay blockchain gaar ah xogta lagu kaydiyo iyo processing. Mabda'a hawlgallada network la barbar dhigi karaa macdanta; farqiga kaliya ee waa madal for macdanta. Users bixiyaan helitaanka ay kaydinta beddelkeeda FileCoins.
Waxaa jira laba siyaabood oo isticmaalaya network:
Macaamiisha iibsan kaydinta daruur ama aad codsatid macluumaad loo baahan yahay ka macdan qodayaasha ee network iyo bixiyo adeegyada la FileCoins.
Qodayaal bixiyaan dadka isticmaala inay helaan ay kaydinta for FileCoins.
FileCoin ayaa tartamaya sida Storj iyo Siicaa. Mashruuca ugu horreeya ee uu ku salaysan yahay Ethereum oo uu leeyahay dhibaato scalability, iyo tan labaad waa wax gaabis ah iyo sidoo kale. FileCoin isticmaalaa ay network gaarka ah iyo hab si ay ula falgalaan dadka isticmaala iyo xogta ay.
$232 million ururiyay
Tezos waa nidaam cusub baahsan is-maamula blockchain abuurta bulshada dhab ah digital. technology The fududeeyaa xaqiijinta rasmi ah, taas oo xisaab ahaan daliil sax hawlgallada xeerka sharciyeed iyo kordhisaa ammaanka oo ka mid ah heshiisyada smart ugu jilicsan ama dhaqaale miisaan.
In si kale loo dhigo, ku dhiirigelinayaan in uu soo bandhigo kale si Ethereum iyo dhawaaqo sii daayo maamuuska cusub oo khaas ah ee la xiriirta heshiiska smart ammaan ka shaqeeya. Nidaamka waxaa loogu talagalay fulinta hawlaha asaasiga ah, sida hufnaanta, ammaanka, iyo xawaaraha shaqada. Afka u gaar ah heshiisyada smart, loo yaqaan Michelson, waxay bixisaa nidaam rasmi ah xaqiijinta hoos mabda'a ah in loo isticmaalo in industry duulista.
Inkastoo sida guul ICO ah, Mashruuca weli waa bilowga aad u of its horumarinta sabab u ah qaar ka mid ah isku dhaca gudaha. Aasaasayaasha shirkadda ayaa soo gaaray dagaalka aan la yeelanay madaxweyne ee fund Switzerland, taas oo uu bixiyo lacag ururinta, iyo maal ay wali sugayaan calaamadihii ay. Inkastoo kuwa ugu Dedejisanaysaan horay u gudbiyay dhowr dacwadaha ka dhanka ah mashruuca.
Bancor – Network hantidooda baahsan
$150 million ururiyay
Bancor waa shabakad baahsan oo kuu ogolaanaya in aad ku kaydiso calaamadihii Ethereum iyo si fudud iyaga loogu badalo kasta oo calaamadihii kale oo aan dhinac saddexaad qiimo ah si toos ah u xisaabaa ayadoo la isticmaalayo jeebka web fudud.
The salaysan mashruuca waa heshiis smart oo noocooda ah hagaagtay of network Ethereum in bedasha calaamadihii Goldogob is dhaafsi cryptocurrency ah. Waxaa si degdeg ah, lagu kalsoon yahay, iyo, waxa ugu muhiimsan, ammaan. Macaamilada waxaa lagu sameeyey iyadoo la kaashanayo of heshiisyada smart. “Magic been xisaabta iyo caanaha fudud iibsaday iyo iibiya sidan oo kale in hantidooda joogto ah suuqa la hayo iyadoo aan loo eegin oo ka mid ah Muga iyo liiska sarrifka a,” ku dhiirigelinayaan in uu sharaxo.
Guulaha ay shirkadda ka sii badan yihiin 50 mashaariicda calaamo, oo ay ku jiraan Power Ledger, MUSUQ Token, DAREEN, iyo kuwa kale. Waxay horay u soo biiray shabakadda Bancor. Sagaal mashaariicda lamaanahaaga horay u shaqeysiin calaamadihii iyo ka iibsan kartaa oo iibin dhex codsiga Bancor ah. BNT sokow (Bancor Network Token), codsiga taageertaa iyo Citaah, GNO, ENJ, BMC, IND, STX, RAJADA, iyo IQT. Iyada oo taageero ka heshiisyada smart, shabakadda diinta 20.7 million BNT ($58 million heerka celceliska Bancor).
$100 million ururiyay
Waa hannaanka cusub ee codsiyada baahsan (DApps), kaas oo bixiya users la interface ku haboon dhaqanka nidaamka iyo sidoo kale dadka kale ee ka mid ah madal. Waxaa intaa dheer, nidaamka madax banaan qaban karin hawlaha jeebka, browser a, iyo chat a. Geedi socodka oo dhan waa baahsan oo, Sidaa darteed, ammaan ah oo degdeg ah.
Waxa xiiso leh in horumarinta waxaa sharad bulshada ee horumarinta mashruuca. Taasi waa, ku dhiirigelinayaan in uu siiyo fursad ay ku milkiilaha calaamadihii in ay bulshada inay ka qayb qaataan go'aan qaadashada u tahay horumarka mashruuca inkastoo xaqiiqda ah in mabda 'ICO ah oo muujinaysa maqnaanshaha xuquuqda sida.
Dhowr codsiyada baahsan ayaa durba la diiwaan gashan Xaaladda, oo ay ku jiraan Gnosis iyo Aragon.
Gnosis (250,000 Citaah ururiyay) waa boosteejo ah oo baahsan, waayo saadaasha. Tusaale ahaan, saadaasha lagu loogu talagalay karaa hadlayaan dad caan ah, wada hadal saxaafadeed, qiimaysay pre-xaraashka shuqullada tahay, sharadka ciyaaraha, iwm.
TenX – Beddelaan oo Bixiya lacagaha Virtual. Markasta. meel kasta oo
$83,1 million ururiyay
shirkadda lacagta Singapore ayaa ku dadaashaa inay noqoto isticmaalka cryptocurrencies sida fudud oo haboon oo sida isticmaalka lacagaha Fiat. Sidaas, waxay heleen ogolaansho ka Visa iyo MasterCard iyo soo saaray ay kaar caag ah u gaar ah. Qiimaha bixinta kaarka waa $15, laakiin waxaad dalban kartaa in ay version dalwaddii on website-ka rasmiga ah iyo sidoo kale. Shirkadda ballan qaaday fiiga guddiga yar u isticmaalaya adeegga haddii kharashka ku qoran kaadhka oo ay ka yar yihiin $1,000 sanadkiiba. Haddii kharashka ku qoran kaadhka oo ka badan heerka this, ajuurada komishanka oo aan la eedeeyay.
maalmahan, nidaamka la Seeraar shaqeeya, halka ether oo aad ku jirto xaalad beta xiran. taageerada ERC20 calaamadihii caadiga ah waxaa sidoo kale lagu sheegay, taas oo macnaheedu yahay waafaqid la DGX, Rep, TRUST, neo, iyo kuwa kale. waa ugu xiisaha badan waa in aad ku bixin kartaa kaadhka TenX ah dukaanka kasta oo aqbala Visa iyo MasterCard. Waa mashruuc aad u rajo ay taageerayaan Vitalik Buterin.
Civic – Hannaanka aqoonsiga Secure
$33 million ururiyay
Civic ujeedadiisu tahay in la dhiso hannaanka a universal in siisaa inay helaan macluumaadka lagama maarmaanka ah ee baahida. kuwaas oo, waxay siisaa inay helaan adeegyada xaqiijinta aqoonsiga iyada oo blockchain. Sayidka, Civic siin doonaa helitaanka fudud oo ammaan ah in xogta shakhsiga isticmaala 'iyo xaqiijiyo aqoonsiga.
Tusaale ahaan, Shirkadda waxay bixisaa dadka degan bariga fog in ay ka qayb aadka gaariga, kaas oo la qaban doonaa oo kaliya iyaga u. Haddii horumariyaha ee la shaqeeyaa Civic, waxay hubin karaan in ay dhamaan ka qaybgalayaashu waa degan qayb ka this ee dalka.
Civic ayaa hore u sii daayay codsi ay madal aqoonsiga digital, loo yaqaan Civic Platform ku Aqoonsiga Secure (version macruufka ah oo keliya).
Aventus – B2B tigidhada Kaabayaasha
$18.7 million ururiyay
Aventus waa aalad si ay u abuuraan iyo kor tikidhada xafladaha kala duwan ee hab amaan ah oo hufan. Qabanqaabiye dhacdo naftooda ma xakameeyo tigidhada qaybinta.
Mashruuca ayaa u ogolaanaya in dib looga fikiro mabda'a of qaybinta tigidh suuqyada sare iyo sidoo kale in la baabi'iyo advertising aan sharciyeysneyn iyo hawlaha sharci-darro ah oo la xiriira iibinta tikidhada. Iyada oo qalab sida, qabanqaabiyayaasha ay awood u dhigay ugu yaraan iyo ugu badnaan qiimaha tikidhada oo lala socdo dhaqdhaqaaqa suuqa sare waxay noqon doontaa, dhigeyno habka oo dhan hufan oo caddaalad ah.
In si kale loo dhigo, waa nidaam tigidhada ammaan. Hawsha aasaasiga ah ee Aventus waa in wax laga beddelo fikirka ah qaybinta tigidh oo aad u baahsan, kaas oo u oggolaan doona in dhiirrigeliyeyaasha iyo nidaamyo gaar u ah dhacdooyinka iibiyo tikidhada si toos ah iyo hesho guddi, waxaa ka.
Hadda waxaan ku bixin doonaa fiiro gaar ah si ay mashaariic dhowr ah ICO Ruush guul.
MobileGo – Second ay ciyaareyso ay Revolution baa imanaysa
$53 million ururiyay
Broadband helitaanka Internet ayaa dunida ka mid ah kulan bedelay. ololaha Single waxaa caajiso, iyo ciyaaryahan doonayaan in midba midka kale in waqtiga dhabta ah tartamaan. technology ee blockchain ka dhigi doonaa kacaanka ah ee ciyaaraha multiplayer: haatan tartamada oo cybersport la heli karo qof kasta doonaa. Taasu waa la heli karo la calaamo smart MobileGo, kaas oo u oggolaan doona malaayiin ciyaartoyda ka soo adduunka oo dhan in ay u midoobaan ee koobabka waa baahsan oo kulan P2P.
Si aad si toos ah u saaray, ku dhiirigelinayaan in uu doonayaa in aan ballaariyo xuduudaha dhacdooyinka e-sports, kaas oo u oggolaan doona ciyaartoyda oo dhan inay ka qayb qaataan tartamada oo siman. Ciyaartoyda waa loo abaalgudi doonaa guulihii gaar ah la-marinno lacag caddaan ah.
Macdanta Center Ruush – Macdanta Multicellular
$43 million ururiyay
Shirkadda Ruush haysta oo bilaabay xarumaha macdanta ee Russia ka, horumarisa macdan qodayaasha gaar ah iyo ugu horumarsan, loo yaqaan Multiclet, oo soo saarta macdan qodayaasha Sunrise.
Fikradda xal wayn ee mashruucu waa in la abuuro ah qode "ASIC u adkaysta" in kuwayga doonaa cryptocurrency a, tusaale ahaan, Ethereum, dhowr jeer si fiican ka badan kaararka garaafyada iyo sida loo isticmaalo qadar yar ee tamarta. Tilmaamayaasha noocan oo kale ah waxaa la qorsheeyey in la gaaro iyada oo loo marayo horumarinta processor a multicellular, oo ku salaysan on mabda'a isku mid ah Kombuyuutarada qaybiyey ee chip kaarka muuqaallo kale a.
maalmahan, shirkadda siisa ASICs Sunrise la chips Bitfury shisheeye. Horumarinta ee processor ka Kombuyuutarada qoyska qaadan doonaa qiyaastii sannad ah. Mashruucan ayaa waxaa loo qaadan karaa kacaanka Ruush ee macdanta.
INS deegaanka – The Warshadaha cuntada, Reinvented
$42.1 million ururiyay
xawaaladaha Tani waa hannaanka ugu horeeyay ee caalami baahsan isku xira si toos ah soo saarayaasha cuntada iyo macaamiisha.
Ujeedadu waa in si toos ah iibsadayaasha la falgala saaraha, Goldogob dukaano iyo dhex- kale oo aan si buuxda loo xakameyn karaa. Dukaamada caadiga ah istimaalka awood suuqa ay: waxay culaysiyo qiimaha iyo jebin ganacsatada yar yar. Waa dhibaato caadi ah oo lagu xalin karo iyadoo INS deegaanka.
SONM – Universal Xagaa Supercomputer
$42 million ururiyay
Mashruucu wuxuu ka dhigan tahay fikradda ah supercomputer caalami ah baahsan waayo, Kombuyuutarada ceeryaanta. Nidaamka hawlgalka baahsan on boosteejo Ethereum ayaa ka mas'uul ah fulinta hawlaha iyo awoodaha Kombuyuutarada. Nidaamkan waa gabal gaarka ah ee software in dadka dhexgalaan kartaa kumanaan ama xitaa malaayiin kombiyuutarada oo dunida ku galay shabakad computer hal. Tani waxay ka dhigi doonaa suurto gal ah si loo gaaro natiijo rikoor-in nooc kasta oo ka mid ah xisaabinta iyo kakanaanta, in waxa la xisaabinayo tirada taagoo in xoogaa yar oo DNA ee daawo, ama cilmi meel fog, ama raadinaya noocyada cusub ee nolosha on Earth iyo meerayaasha kale.
Lacagta ugu badan ee lagu jiro iibka calaamo
Venezuela kormeera b ...
Post Previous:Sidee Market ICO ka bedeli doono 2018?
Post Next:Blockchain News 8 January 2018